Mw-677 (Ibutamoren) uzuzu (159752-10-0) hplc ma98% | AASraw
MK-677 (Ibutamoren) ntụ ntụ
/ ngwaahịa / SARMS / MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ
Rating: SKU: 159752-10-0. Category: SARMS
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ (159752-10-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
MK 677 (Ibutamoren) uzuzu uzuzu
MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ isi agwa
aha: MK 677 (Ibutamoren) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C27H36N4O5S
Molekụla arọ: 624.776
Melt Point: 161 ka 315ºC
MK 677 (Ibutamoren) ojiji uzuzu na usoro uzo steroid
MK-677 ntụ ntụ (Ibutamoren ntụ ntụ) Aha
Ibutamoren na-akpọkwa MK-677 ntụ ntụ (CAS 159752-10-0).
MK-677 ntụ ntụ
Dị ka ọtụtụ nnyocha si kwuo, MK-677 Ibutamoren doses nke dị n'agbata ise milligrams na iri abụọ na ise milligrams (5-25mgs) kwa ụbọchị egosipụtawo nnukwu ihe.
Ịdọ aka ná ntị na ikuku
A na-ejikọta ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke hormone nke na-ejikarị aka aka, nsogbu akpụkpọ anụ, uru dị arọ, adịghị ike ahụ, ahụ ọkụ insulin na ntakịrị ụba agụụ.
MK-677 Ibutamoren na-arụ ọrụ na ghrelin receptor. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma iji mee ihe na-enweghị ihe ọ bụla.
N'ozuzu, a na-atụ aro ngwaahịa a ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ihi ụra, nsogbu dị mgbagwoju anya, nsogbu njigide nitrogen, nsogbu nke ike, na ike nsogbu .Ọ dịkwa mma iji melite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ mkparị, onye na-agba ọsọ, onye mgba ọkụ, onye na-egwu ọkpọ, onye na-enye ume ma ọ bụ na ị na-achọ ụzọ dị iche iche iji mee ka ike gị dị elu ma ọ bụ melite ike gị, Ibutamoren bụ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka gị.
MK 677 ntụ ntụ (CAS 159752-10-0)
MK-677 (Ibutamoren) ntụ ọka
Esi zụta MK 677 ntụ ntụ (CAS 159752-10-0); zụta Ibutamoren ntụ ntụ si AASraw